NL (ခ) ဒီအမောင်: 02/19/12
ပုဂံဒေသ Historical Park သို့မဟုတ် Archaeological Park တည်ဆောက်ရေး ဆွေးနွေး
ပုဂံဒေသ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အနာဂတ်တွင် Historical Park သို့မဟုတ် Archaeological Park တည် ဆောက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မန္တလေးတိုင်း ညောင်ဦးမြို့နယ် ပုဂံရှေးဟောင်း သုတေသနပြတိုက်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် က ကျင်းပသည်။ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ၊ ရှေးဟောင်းသုတသေန၊ အမျိုးသား ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာ ပညာရှင် အသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by nllamin.com at 8:43 PM
‘ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် အတွေးအမြင်များ’ အမည်ရှိစာအုပ် ထုတ်ဝေတယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး သွားကြည့်လိုက်တယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်းပဲ သူတို့ပြည်နယ် သူတို့လူမျိုးစုအတွက် အခွင့်အရေးတောင်းထားတာကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ငါတို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဟိုအခွင့်အရေး ရသင့်တယ်။ ဒီအခွင့်အရေးရမှ ဖြစ်မယ် (ဗမာလဲ တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ တိုင်းရင်းသားလူများစုဖြစ်တာနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဖြစ်တာပဲ ကွာခြားတာပါ) စသဖြင့် ၊ စသဖြင့် အခွင့်အရေးတောင်းထားတဲ့ စာအုပ်ကြီးဗျ။ တကယ့် အတ္တကြီးတဲ့ သူတွေပဲဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ကရင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ကယား၊ ချင်း တွေက ယောကျားတွေဖြစ်ပြီး. . . ဘာလို့ အခွင့်အရေးတွေပဲ ထိုင်တောင်းနေကြတာလဲ? အမြဲဆိုသလို ခင်ဗျားတို့ ပြည်နယ်နဲ့ လူမျိုးစု အခွင့်အရေးပဲ တောင်းနေကြတယ်။ မင်းတို့ မိဘတွေက လူ့ဘ၀ဆိုတာ အခွင့်အရေးပဲ တောင်းနေရမယ်လို့ သင်ပေးထားတယ် ထင်တယ်။ အမိနိုင်ငံကို ချစ်ရကောင်းမှန်း … .. မသိ.. . အမိနိုင်ငံအပေါ်မှာ တာဝန်ကျေရမှန်း . . . မသိကြဘူးနော်။ ခင်ဗျားတို့ကို အခြေခံ လူကျင့်ဝတ်လေး တစ်ခုကို ပြောပြမယ်ဗျ။ နိုင်ငံသားရဲ့ အခွင့်အရေးကို လိုချင်ရင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကိုသိရမယ်.. ထိုတာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ဖို့လဲ ကြိုးစားရမယ်ကွ။ လူပီသချင်ရင် မင်းတို့တွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အခွင့်အရေးပဲ တောင်းနေတာကိုရပ်ပြီး
Posted by nllamin.com at 8:35 PM
Posted by nllamin.com at 8:20 PM
Posted by nllamin.com at 8:07 PM
အစိုးရက အများပြည်သူသို့ ရွှေများထုတ်ရောင်း
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အတွင်းသို့ ရွှေများထုတ်ရောင်းနေပြီး နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စသည့်မြို့ကြီးများတွင် တစ်ပြိုင်တည်းရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သတင်းရရှိသည်။
ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက် တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အသုံးပြုသူများ အရည်အသွေးမြင့်ရွှေသုံးနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြာင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်ကျောက်မျက်ရတနာပြခန်းတွင် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီး မန္တလေး၌ အစိုးရဘဏ်တစ်ခုနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် ရောင်းချပေးနေကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှသိရှိရသည်။
ရောင်းချမှုပုံစံမှာ သာမန်ပြည်သူများအပြင် ရွှေလုပ်ငန်းရှင် များကိုပါ ရောင်းချပေးပြီး ရောင်းချမှုပမာဏကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိဘဲ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မှတ်ပုံတင်)ဖြစ်၍ စာရင်းပေးဝယ် ယူနိုင်သည်ဟုသိရသည်။
Posted by nllamin.com at 7:57 PM
ငါဟာ အရင်တုန်းကနဲ့မတူ .. ပြောင်းလဲနေခဲ့သူ
ငါဟာ ဖြတ်လို့ ငါမနိုင် .. ငါပြန်ခေါ်ရတဲ့သူ
အတွေးကြကြ ပြတ်ပြတ်သားစကား .. ငါထက်လုပ်လို့မှား...
သီချင်းတစ်ပုဒ်လို သူ့စာသား... ငါဟာ သံဇဉ်လေးပါလား..
Posted by nllamin.com at 7:10 PM
ကျွန်တော်ဟာ ၂၁ ရာစုထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေရတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ
ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှာတော့ အရမ်းကို တိုးတက်လာပါပီ .. နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာ
ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ ပညာများနှင့်အတူ တိုးတက်ခေတ်မှီလာသည့် ခေတ်ကြီး တစ်ရက်လည်း
ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ငွေဟာလည်း ဒုတိယ ဘုရားသခင် အဖြစ် သတ်မှတ်နေရာယူ
၀င်ရောက်လာပါတယ်.. ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုတော့ ပျက်စီးမှုအားလုံးအတွက် ငွေအဖြစ်အစားထိုး
လဲလှယ်ခြင်းဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ၇၅ / ၈၀ % လောက် ဒီလိုတွေပါဘဲ.. ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
Posted by nllamin.com at 7:07 PM
လူငယ်တွေပြုသမျှကို အကောင်းမမြင် အကြောင်းထင်တတ်တဲ့ လူကြီးအချို့
အဖြစ်မရှိ အတတ်ဆန်းတယ်ဆိုကျသော လူကြီးအချို့
သူတို့တတ်သူတို့သိအစုံသိသောလည်း သူတို့မသိတာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်..။
လူကြီးတွေကများသောအားဖြင့် သူတို့လုပ်သမျှကို ကောင်းတယ်ထင်ကျသူတွေပါ..
လူကြီးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက တခါတလေ လူငယ်တွေနာခံစရာကောင်းပေမဲ့
နည်းလမ်းကျသောလဲ.. တခါတလေ အတွေးခေါ် ဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်
တစ်ချို့ လူကြီးတွေကလည်း လူငယ်တွေအပေါ် နားလည်ပေးတတ်ကျတယ် စကားလုံး လှလှလေးတွေနဲ့
ပညာတွေပေးတတ်ကျပါတယ် .. အဲ့ဒီအခါကျရင်တော့ လူငယ်တွေ သဘောကျလေ့ ရှိတတ်တာပေါ့...
Posted by nllamin.com at 7:02 PM
ပုဂံဒေသ Historical Park သို့မဟုတ် Archaeological P...
အများကြီးမလိုအပ်သောငွေနှင့် အများကြီးလိုအပ်သော မိတ...